XOG CUSUB: Villa Somalia oo kala direysa Ciidamada ilaalinaya Musharixiinta Koofur Galbeed & Farmaajo oo koofur galbeed kubad siyaasadeed ku ciyaarayo | allsaaxo online
XOG CUSUB: Villa Somalia oo kala direysa Ciidamada ilaalinaya Musharixiinta Koofur Galbeed & Farmaajo oo koofur galbeed kubad siyaasadeed ku ciyaarayo
Xog gaara oo ay heleyso allsaaxo.com ayaa sheegeysa in Dowlada Federaalka Soomaaliya ay qorsheyneyso inay la wareegto sugida Amniga Musharixiinta Xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed.
Kulan ka dhacay Villa Somalia ayaa lagu gorfeeyay sidii xal looga gaari lahaa Amni darada kusoo korortay Baydhabo iyadoo weeraro is daba joog ay ka dhaceen Magaaladaasi.
Dowlada dhexe ayaa Todobaadkii hore Ciidamada geysay Baydhabo iyagoo la dajiyay xero ku taalla agagaarka Madaxtooyada Maamulka Koofur Galbeed balse Xildhibaano dhowr ah ayaa kasoo horjeestay iyagoo sheegay in Dowlada ay faragalin qaawan ku heyso Doorashada Koofur Galbeed.
Ciidamada Dowlada ay geysay Magaalada Baydhabo ayaa la sheegay inaysan ku filnaan karin amniga Magaalada oo markii hore loogu tala galay inay ku koobnaadaan Goobta Doorashada ka dhaceyso laakiin hada Dowlada Dhexe waxay dooneysaa inay gabi ahaanba Amniga Magaalada la wareegto.
Ciidamadan ayaa isugu jiri doona Boolis iyo Nabad sugid iyadoo goobta Doorashada ay ka dhaceyso la qorsheynayo in la geeyo Ciidamada Alpha Group oo Maalmaha soo aadan Muqdisho ka baxaya halka Booliska iyo Nabad sugida Magaalada lagu daadin doono.
Afar ruux oo seddex kamid ah yihiin ciidamada booliska ayaa Habeen ka Hor ku dhaawacmay weerar ka dhacay magaalada Baydhabo, waxaana xiligaasi socday baaritaanka gaadiid doonayay inay magaalada galaan.
Dowlada Soomaaliya oo kaashaneysa Maamulka Koofur Galbeed ayaa dooneysa inay sare u qaado Amniga Magaalada inta ay doorashada socoto maadaama Madaxda Dalka iyo Xubno ka socda Beesha Caalamka ay tagayaan Baydhabo.